Warar - Waa kuwee warshadaha ay yihiin qalabka wax lagu farsameeyo birta qolofka inta badan lagu isticmaalo, maxayse yihiin shuruudaha gaarka ah?
Waa kuwee warshadaha yihiin qalabka wax lagu farsameeyo birta qolofka inta badan lagu isticmaalo, maxaase looga baahan yahay shuruudo gaar ah?
Wax soo saarka birta ah ee qolofka qalabka ayaa badanaa loola jeedaa sii wadida farsamooyinka taarikada miisaanka culus leh, waxayna ka ciyaari kartaa door aad u wanaagsan hawshan. Sababtoo ah qaybaheeda la farsameeyay waa kuwo khibrad leh, sidaa darteed dhammaan goobta Waxay sidoo kale soo jiidatay indhaha dad badan, marka geeddi-socodka howsha, waa inaan sii fahanno xaaladahaas oo ah kuwa ugu badan ee warshadaha lagu isticmaalo.
Horumarka isdaba jooga ah ee warshadaha elektarooniga isgaarsiinta sanadihii la soo dhaafay sidoo kale wuxuu u baahan doonaa shuruudo badan oo ka baaraandeg ah dhinacyada oo dhan, isla mar ahaantaana waxay noqon doontaa mid aad u sax ah, maxaa yeelay badeecooyinka ku jira geedi socodka howsha ayaa buuxin kara shuruudaha sare. Horumarka warshadaha Sidoo kale waxaa soo foodsaartay saameyn weyn, inta badan shirkadaha caanka ah ee gudaha iyo kuwa ajaanibta ah ayaa laga yaabaa inay dalab u qabaan dhinacyadaas, marka dhinacyada farsamada ayaa muhiim noqon doona.
Horumarinta warshadaha wiishka
Markaad isticmaaleyso qalabka birta ah ee qolofka qalabka, waxaad sidoo kale ogaan doontaa in qaybo badan oo ka mid ah warshadaha wiishku ay sidoo kale aad u saxan yihiin. Inta lagu jiro hawsha dalabka, waxaa jira noocyo badan oo qaybo ah, shirkad kasta oo soosaarana waa weyn waxay lahaan doontaa alaab-qeybiyeyaal badan oo u sameeya ka shaqeynta iyo u qaybinta iyaga, sidaa darteed waa inaan fiiro gaar ah u yeelannaa xaaladahaas gaarka ah waqtiga, oo aan awood u yeelannaa inaan ogaanno qaar ka mid ah isbeddelada gaarka ah guud ahaan warshadaha. Kuwani waxay saameyn wanaagsan ku yeelan doonaan dhammaanteen. Waxaa loo adeegsadaa dhinacyo badan oo kala duwan, sidaa darteed xulashada saxda ah waa in la sameeyaa.
Waqtiga boostada: Sep-25-2020